Barcelona Oo U Muuqata Mid Heshay Badalka Luis Suarez, Premier League Ayuu Joogaa – Wararka Ciyaaraha Maanta
Barcelona Oo U Muuqata Mid Heshay Badalka Luis Suarez, Premier League Ayuu Joogaa
Kooxda Barcelona ayaa wali suuqa ugu jira helitaanka badalka Luis Suarez ee mustaqbalka xilli xiddiga reer Uruguay ku jiro da,diisii 32 kuna sii dhawaanayo wakhtigii uu ka fadhiisan lahaa ciyaaraha kubada cagta.
Wargayska MARCA ayaa sheegaya in ay kooxda Barcelona si aad ah uga fikirayso in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Everton ee Richarlison marka la gaadho suuqa kala iibsiga xagaaga.
Richarlison oo 21 jir ah ayaa ku jira xilli ciyaareed cajiib ah isaga oo kooxdiisa Everton ka caawiyay goolal badan oo uu dhaliyay xilli ciyaareedkan una suurtagaliyay in ay soo bandhigto qaab ciyaareed fiican.
Richarlison ayaa kooxda Everton ugu soo biiray lacag dhan 35 milyan oo euro isaga oo ugaga soo biiray kooxda Watford suuqii xagaaga kana mid noqday weeraryahanada ugu muhiimsan premier League.
Xiddiga reer Brazil ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyay 13 gool sidoo kale caawiye ka noqday 2 kale 35 kulan oo uu u saftay kooxdiis Everton xilli ciyaareedkan tatamada oo dhan.
Xiddiga ayaa samayn kara horumar fiican sanadaha soo socda waxana ay Barcelona aaminsantahay in uu noqdo karo xiddiga mustaqbalka hogaamina kara weerarkooda waliba ka ciyaari kara garabka weerarka hadii loo baahdo.